အဆိုပါ ပူနွေးသောရာသီဥတု သေးကျော်မဟုတ်ပါဘူး. အချိန်နှင့်ယခုလတောင်ပိုင်းအီတလီသို့သွားရောက်မယ့်အကြောင်းပြချက်ကောင်းနေဆဲရှိပါသည်! တောင်အီတလီမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိတယ်. တောင်ပိုင်းအီတလီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနေရာများပါဝင်သည်; သိသိသာသာကမ်းရိုးတန်း၏လှပသောပို်, စုံလင်သောကမ်းခြေမြင်ယောင်, ချစ်စရာကောင်းကမ်းရိုးတန်းကျွန်းများ, နှင့်သမိုင်းဝင်မြို့ကြီးများနှင့်မြို့ကြီးများ၏ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာချရုံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကျဉ်းမြောင်းဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် 10, ဒါပေမယ့်ဒီမှာ 10 တောင်ပိုင်းအီတလီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးသောနေရာများ.
ဤသည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဒေသ ထိုကဲ့သို့သော Amalfi အဖြစ်အချို့သော idyllic ကမ်းရိုးတန်းမြို့များ features, Erchie, အရွယ်မရောက်သေးသူများ, နှင့် Positano - ဤမြို့များကိုဆန့်ကျင်တက် stack ကြောင်းရောင်စုံအိမ်များစီးရီးရှိသည် တောင်စောင်း နှင့်ဓာတ်ပုံ - ပြီးပြည့်စုံသောဓာတ်ပုံကိုအခွင့်အလမ်းများကိုပေး.
ထို့အပွငျ, Ravello ထိုသို့သောဗီလာ Rufolo အဖြစ်ဆိုဒ်များပေး ပြိုင်ဘက်ကင်းအမြင်များ မြေထဲပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီး.
Sorrento အဆိုပါခရီးသွားဧည့်နှစျသိမျ့အဖြစ်ထူးခြားတဲ့တွေ့ရသောသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အဟောင်းမြို့ရှိရောင်းချမည့် higher-end ရှေးဟောင်းနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်. တစ်ဦးကကူးတို့ Capri ၏ကျွန်းမှဒီကနေအရွက်, ထိုသို့ပွန်ပေအဘို့ကြီးစွာသောချွတ်ခုန်အချက်ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, Sorrento ကိုလည်း၎င်း၏လူသိများသည် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အစားအစာ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ်းပါးနေရာ (အဘယ်သူမျှမကမ်းခြေသော်လည်း), တောင်ပေါ်က Vesuvius နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များ.
တစ်ဦးတည်းဂရိဗိသုကာဒါသို့ကြောင်းထားရန်သေချာစေပါသွားရောက်ရကျိုးနပ်သည် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ် သငျသညျကြည့်ရှုရန်ရှိသည်သောကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားဂရိဘုရားကျောင်းသုံးခုသွားရောက်ခြင်းအပြင်. အသက်အကြီးဆုံး 550BC အကြောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ (ပေးသို့မဟုတ်တစ်နှစ်ယူ) နှင့်အံ့သြဖွယ်သောအရာ Hera ၏ဗိမာနျတျောဖြစ်ပါသည်.
Naples, သို့မဟုတ်နာပိုလီ, အဘယ်အရာကိုဘာသာစကားအပေါ်မူတည်, အီတလီမှာတတိယအကြီးဆုံးသောမြို့ဖြစ်၏. ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်, တောင်ပိုင်းအီတလီ၏ဤအပိုငျးအပေါ်အချို့သောအလွန်ဆန့်ကျင်အမြင်များရှိပါတယ်. တချို့အတွက်, အဲဒါကြီးမားတယ်, ညစ်ညမ်းသော, ရာဇဝတ်မှု, နှင့်ပြိုလဲ, အခြားသူများကတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းနှင့်လေထုဖြစ်ပါသည်. နောက်ကျောကသင်၏ဆံပင်မှုတ်ဘာပဲ, ကျနော်တို့ခန့်မှန်း? အရာတစ်ခုမှာသော်လည်းသေချာသည်. ဤသည်ကမ်းရိုးတန်းတောင်ပိုင်းမြို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပြီး!
များသော အကြိုက်ဆုံးအီတလီအစားအစာများ ဝေါဟာရ နေပယ်လ်နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင် ထိုကဲ့သို့သောပီဇာအဖြစ်ဒေသများ, နှင့် spaghetti. ဤရွေ့ကားဟင်းလျာများဒီနေရာမှာအလေးအနက်ထားနှင့်များသောအားဖြင့်လတ်ဆတ်တဲ့ feature နေကြတယ်, ဒေသအလိုက်စိုက်ပျိုးပါဝင်ပစ္စည်းများ. ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု နေပယ်လ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ပါဝင်သည် အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်, နယူး Castle, အဖြစ်ကောင်းစွာ Castel del Ovo ၏အိုင်နားခံတပ်အဖြစ်. ဗက်စူးဗီးယပ်စ်၏ဘေးတွင်လည်းမြို့ဖြစ်သည်, ဥရောပတိုက်ကြီးပေါ်တွင်သာတက်ကြွစွာမီးတောင်.
အဆိုပါ Trulli စတိုင် built-in နေအိမ်များမော်တာမသုံးဘဲ conical သောကျောက်ခေါင်မိုးနှင့်အတူထားကြပါတယ် (သော်လည်း, ငါမဆောက်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုကိုးကားကြဘူးငါ). အသက်အကြီးဆုံးအိမ်များ 14 ရာစုကနေချိန်းတွေ့ကြနှင့် လုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေ - တွေ့မြင်၏တ ဦး တည်းအောင်နှင့် လှပသောမြို့ရွာ သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တောင်ပိုင်းအီတလီမှာ.
ကြည့်ရှု, ကျွန်မကြိုတင်၌သင်တို့ကိုသတိပေးနေပါတယ်. ဤအရပ်ဌာန၌အဆိုပါဓာတ်ပုံကိုအခွင့်အလမ်းများကိုရူးများမှာ. သင်အမှန်တကယ်အရာပေါ်ထွက်လက်လွတ်မသတိထားပါ! အဆိုပါ လှပသောရှေးဟောင်းမြို့ Tropea ၏ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိလမ်းများတစ်လျှောက်တွင်ရှိသည် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့သဲကမ်းခြေ, က Hercules ကိုယ်တော်တိုင်ကတည်ထောင်ခဲ့ကြဟု.
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် အပန်းဖြေ, နှစ်ခုရှိတယ် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အသင်းတော်များ Tropea လွန်းအတွက်, Santa Maria del Isola သည်အလယ်ခေတ်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်းများပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာနုန်းမြေ ၀ င်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်းကျွန်းနှင့်ပြည်မကြီးအကြားပေါင်းကူးတံတားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။. အခြားဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်; ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုအသင်းတော်တံခါးကိုအပြင်ဘက်တွင်ထိုင်လျက် WW2 ကနေချိန်းတွေ့နှစ်ခုပေါက်ကွဲဗုံးရှိပါတယ်. ဒေသခံများအဆောက်အဦးဒီတော့သင့်ရဲ့ခြေလှမ်းကိုစောင့်ကြည့်သည့်နာယကသူတော်စင်ဖြင့်ကာကွယ်ထားခံခဲ့ရသည်ဟုယုံကြည်!
လှပသောအနက်ရောင်ကမ်းခြေတဝိုက် ZIP မှဆိုင်ကယ်ငှားရမ်း. Pollara အတွက်နေဝင်ချိန် aperitivo. Stromboli ၏ပတျဝနျးကငျြကျွန်းများတဝိုက် Boating, Panarea, နှင့် Lipari. မီးတောင်အတွက်ဆာလ်ဖာရေ Spa မ်ားနှင့်အတူရနှေးငှေ့မြားသောရယူခြင်း. ဂရိ Vibe (အံ့အားသင့်ခြင်းမရှိ - ကျွန်းများ Aeolus များအတွက်အမည်ရှိခဲ့ကြသည်, လေ၏ဘုရား, ဂရိအခြေချနေထိုင်သူများအားဖြင့်). ဆားကမ်းနားဆင်းဖိတ်အိမ်များဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်. တဖန်သင်တို့အပေါ်၌ရှိကြ၏တူခံစား လျှို့ဝှက်ချက်ကြီး သင်ချစ်ရသူများနှင့်သာမျှဝေလိုသည်!
သင်၏အိတ်များကိုအီတလီတောင်ပိုင်းခရီးအတွက်အဆင်သင့်သိမ်းထားပါ? ထိုအခါနှင့်သင်၏ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် တစ်ဦးကရထား Save မိနစ်ပိုင်းအတွင်း. အဘယ်သူမျှမပိုဝန်ဆောင်ခ, အဘယ်သူမျှမပျော့သွားတာကို, ပဲပျော်စရာ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 တောင်ပိုင်းအီတလီခုနှစ်တွင်သွားရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-visit-south-italy%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)